Aqalka Cad wuxuu doonayaa inuu si weyn u yareeyo dhimashada daroogada • Drugs Inc.eu
Bogga ugu weyn Daroogooyinka Aqalka Cad wuxuu doonayaa inuu si weyn u yareeyo dhimashada daroogada
Aqalka Cad wuxuu doonayaa inuu si weyn u yareeyo dhimashada daroogada
albaabka Ties Inc. April 27 2022
maqaal by Ties Inc. April 27 2022
Qorshaheedii ugu horreeyay ee faahfaahsan ee lagu dhimayo kor u kaca dhimashada xad dhaafka ah, maamulka Biden wuxuu xooga saarayaa dhimista waxyeelada.
Taas macnaheedu waa helitaan badan oo irbado nadiif ah, xariijimaha tijaabada fentanyl, iyo naloxone. Cirbadaha nadiifka ah waxay kaa caawinayaan yaraynta faafitaanka cudurka. Xarigga tijaabada Fentanyl waxay u ogolaataa isticmaalayaasha daroogada inay hubiyaan dawada ka hor inta aysan ku dhowdahay inay isticmaalaan opioid-ka awoodda leh. Naloxone waa daawo si dhakhso ah u beddeli karta xad-dhaafka opioid.
1 Yaraynta waxyeelada iyo Kahortagga Dawooyinka
2 Caawinta daawadu way kala duwan tahay gobol ahaan
"Tallaabada ugu muhiimsan ee aan hadda qaadi karno si aan u badbaadino nolosha waa inaan helno naloxone ku filan qof kasta oo u baahan cabsi la'aan ama xukun," ayuu yiri Dr. Rahul Gupta, agaasimaha Xafiiska Aqalka Cad ee Siyaasadda Xakamaynta Dawooyinka Qaranka.
Yaraynta waxyeelada iyo Kahortagga Dawooyinka
Dhimashada waxyeeladu waa mid ka mid ah afar siyaasadood oo maamulka Biden uu sheegay in ay tahay in si degdeg ah loo fuliyo si wax looga qabto tirada diiwaan gelinta ee dhimashada xad dhaafka ah. Marka loo eego CDC, qiyaastii 106.854 qof ayaa u dhintay dawada xad dhaafka ah muddada sanadka ah ee dhammaanaya Noofambar 2021.
Intaa waxaa dheer, dawladdu waxay higsaneysaa inay laba jibaarto tirada daaweynta oggolaanshaha 2025 oo ay hubiso in bukaannada ay helaan daawooyinka opioid inta lagu jiro daaweynta. "Istaraatiijiyada Xakamaynta Dawooyinka Qaranka waxay saadaalisay balaadhinta weyn ee helitaanka daaweynta iyo dhimista waxyeelada, taas oo badbaadin doonta nafo badan," ayuu yidhi Dr. Josh Sharfstein oo ka tirsan Dugsiga Johns Hopkins Bloomberg ee Caafimaadka Dadweynaha.
Aqalka Cad ayaa sidoo kale soo jeedinaya xog uruurin wanaagsan si ay u caawiso saadaalinta cidda ugu badan ee khatarta ugu jirta xad dhaafka iyo in laga digo isbeddelada saadka daroogada. Waxay ku baaqaysaa dadaallo cusub oo lagu carqaladeynayo ka ganacsiga maandooriyaha, oo ay ku jirto cunaqabatayn ka dhanka ah shakhsiyaadka wax tahriibiya.
Caawinta daawadu way kala duwan tahay gobol ahaan
Gupta waxa uu sheegay in warbixintii golaha ee labada xisbi ee dhawaan soo baxday oo ku talinaysa in si weyn loo qaato adeegyada yaraynta waxyeelada ay taageerto qodobkiisa. Si kastaba ha ahaatee, helista dhimista waxyeelada iyo daawaynta way ku kala duwan tahay gobol ilaa gobol. Massachusetts, tusaale ahaan, waxay balaadhinaysaa qeexida dhimista waxyeelada ee ka baxsan qorshaha Biden. Tuubooyinka dilaaca ayaa lagu qaybinayaa gobolka si loo xaddido gudbinta caabuqyada. Sharci ayaa sidoo kale la tixgelinayaa daroogadaogolaanaya isticmaalka la kormeero si looga fogaado xad-dhaaf ah.
"Haddii aad heli karto adeegyadan waxay inta badan ku xiran tahay meesha aad ku nooshahay," ayuu yiri Robin Pollini, oo ah borofisar ku-xigeenka Jaamacadda West Virginia oo daraaseeya isticmaalka mukhaadaraadka iyo dhimista waxyeelada.
Pollini wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay in maamulka Biden uu ku jiro dhimista waxyeelada qorshihiisa lagu dhimayo dhimashada xad dhaafka ah, laakiin maalgelinta ayaa ah mid aad uga fog. Pollini iyo khubarada kale ee dhimista waxyeelada ayaa sheegaya in dowladda federaalku ay ku qasban tahay in ay qaaddo xayiraadda maalgelinta federaalka ee silinjyada haddii ay rabto in ay ballaariso barnaamijyadan.
Akhri wax dheeraad ah npr.org (Source, EN)
Isticmaalka HHC ma caawisaa bogsiinta lafaha jaban?
Boqolaal bukaan Ingiriis ah oo ku tiirsan rugaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay oo qaali ah...
Amazon waxay bilaabeysaa iibinta alaabada CBD…
5 siyaabood oo looga fogaado saliid CBD been abuur ah ...